Ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Kenya oo al-Shabaab kula diriray Gedo - Sabahionline.com
Ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Kenya oo al-Shabaab kula diriray Gedo Abriil 27, 2012
Kow iyo toban qof ayaa geeriyootay in kale oo badanna waa ay dhaawacmeen markii ay ciidamada Soomaalida iyo kuwa Kenya al-Shabaab isku hardiyeen gobolka Gedo oo dhaca koofur galbeed Soomaaliya, Idaacadda Shabeelle ee Soomaaliya ayaa arrintaa Jimcihii (27-ka April) werisay. Qodobbo la xiriira
6 Xubnood oo ka tirsan al-Shabaab ayaa u soo goostay ciidamada Soomaaliya
Calankii al-Shabaab oo laga dajiyay bartamaha magaalada Baydhabo
Ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Midowga Afrika oo al-Shabaab kula dagaallamay Garbahaareey
Dagaalka ayaa bilowday markii ay ciidamada Soomaalida iyo kuwa Kenya weerarro cirka iyo dhulka ah ku qaadeen saldhigyo ay al-Shabaabku ku lahaayeen meel u dhaw Garbaharrey oo ah xarunta gobolka Gedo. Aaden Axmed Xirsi oo ah afhayeenka ciidamada dawladda ee gobolka Gedo ayaa sheegay in ciidamadiisu ay ku guulaysteen in ay iska caabbiyaan weerar-celiskii al-Shabaab, iyo weliba in ugu yaraan toddobo dagaalyahan lagu diley dagaalka. Al-Shabaab ayaa iyaduna guul sheegatay, oo sheegtay in ay u xoog sheegatay weerarkii ay askartu ku soo qaadday, dileyna tiro aan la ogeyn oo ciidanka ah. Muxuu kula yahay qoraalkan?